XOG: Christian Panucci oo loo magacaabayo maareeye kooxeedka AC Milan – Gool FM
XOG: Christian Panucci oo loo magacaabayo maareeye kooxeedka AC Milan
Raage April 25, 2017
(Milano) 25 Abriil 2017 – Christian Panucci ayaa lagu wadaa in loo magacaabo maareeye kooxeedka AC Milan, si uu iskugu xiro maamulka sare iyo kooxda oo la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo.
Kooxda ayaa waxaa 13-kii bishan si rasmi ah ula wareegey ganacsadaha Yonghong Li taasoo uu la socdey isbeddel buuxa oo lagu sameeyay maamulka kooxda oo ay haatan kala wadaan Massimiliano Mirabelli iyo Marco Fassone.
Sida uu qorayo Mercato Retweettato, waxaa weli soo socda isbedel kale kaasoo ah magacaabista laacibkii hore ee AC Milan ee Panucci, kaasoo isku xiri doona kooxda Vincenzo Montella iyo maamulka sare, waana jago uu horay u diidey kantankii hore ee Paolo Maldini.
Ninkan oo haatan 44-jir ah ayaa AC Milan u dheelayay intii u dhaxaysey 993 ilaa 1996 kahor intaanu Fabio Capello u raacin Real Madrid.
Panucci ayaa haatan lafa-gure dhanka isboortiga ka faallooda ka ah hilinka ciyaaraha Talyaaniga ee Mediaset Premium.
KACAANKA SERIE A: Horyaalka Talyaaniga oo fasalka soo aaddan ee 2017-18 la ciyaari doono 4 maalmood
Juventus oo qarka u saaran inay soo qaadato qannaaska la qaban la'yahay ee Patrik Schick